भातृ संगठनलाई पूर्णता दिएर परिचालन गर्न सकिए ठबन्धनविनै कांग्रेस लड्न सक्छ : नैनसिंह महर « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
भातृ संगठनलाई पूर्णता दिएर परिचालन गर्न सकिए ठबन्धनविनै कांग्रेस लड्न सक्छ : नैनसिंह महर
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले तत्काल पार्टीका भातृ संगठनलाई पूर्णता दिनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार राजधानीमा आयोजित आगामी निर्वाचनमा भातृ संस्थाको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै नेता महरले भ्रातृ संगठनले पूर्णता नपाउँदा पार्टी र संगठनका लागि काम गर्ने कार्यकर्ताहरूले स्थान नपाएको बताए।
‘पार्टीका भातृ र सुवेच्छुक संस्थाले पूर्णता नपाउँदा काम गर्न निकै गाह्रो भइरहेको छ। क्याम्पस, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र सबै ठाउँमा भातृ र सुवेच्छुक संस्थाको नेतृत्व जाम छ’, उनले भने ‘युवासँगै थुप्रै व्यक्ति बाहिर रहेकाले स्वतन्त्रहरू सलबलाउन थालेका छन्। राजनीतिप्रतिको वितृष्णा बढ्दो छ ।’ उनले राजनीतिप्रति युवा वर्ग र बाहिर रहेका मानिसको आकर्षण बढाउनका लागि चाँडोभन्दा चाँडो भातृ तथा सुवेच्छुक संस्थालाई पूर्णता दिनुपर्ने बताए ।
उनले पदाधिकारीसहितको पूर्ण आकारको कमिटी बनाउन पार्टी नेतृत्व पङ्क्तिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । यसो गरे मात्रै नयाँ परिस्थितिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने महरको दाबी छ। सबै भातृ र सुवेच्छुक संस्थाको पूर्ण कमिटी बनाउँदा १५ हजार मानिसले जिम्मेवारी पाउने महरले बताए। जिम्मेवारी प्राप्त गर्दा मानिसको सक्रियता बढ्ने भएकाले गठबन्धनविनै पनि पार्टी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुने महरको भनाइ छ।
‘जिम्मेवारी विहीनले के माग गर्ने ? कसलाई काम लगाउने ? अहिले धेरै युवा रनभुल्लमा छन्। अब यो परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ। पार्टीलाई जीवन्त पार्न भातृ संस्थालाई पूर्णता दिनै पर्छ’, महरले भने। उनले गाउँ–गाउँसम्म भातृ संगठन पुग्दा जनताको घरघरमा पुगेर पार्टीको मिसन र भिजन बुझाउन सहज हुने बताए।
‘नेविसंघ कांग्रेसको मुटु हो। युवासंघ तरुणहरूको ऊर्जा हो। सांस्कृतिक संघ कलाकर्मीहरूको संगठन हो। यस्तै अन्य थुप्रै संगठनले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। ठूलो समूह जाम भएर बसेको छ। जसले पार्टीका गतिविधिमा ठूलो असर गरेको छ’ महरले भने। उनले पटक–पटक पार्टीको बैठकमा पनि आफूले यही माग राख्दै आएको बताए। यसप्रति नेतृत्व पनि गम्भीर रहेकाले चाँडै भातृ संगठनले पूर्णता पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको महरले बताए ।
प्रकाशित मिति : असार ९, २०७९ बिहीबार २ : ०४ बजे